आमा- निशा अर्याल
विदेश- शारदा पौडेल
नलेखिएको आमाको कथा-निशा अर्याल
कलियुगकी सावित्री-- जय बहादुर घिमिरे
माया लामाको जीवन कथा (अडियोमा)
अधुरो कविता--निशा अर्याल
मासुको तिर्सना- मन्दिरा मधुश्री
अनुत्तरित प्रश्नहरू--एल एन सुवेदी “हस्ती”
एक बालक गर्भ मै थियो- बिरेश दाहाल
बिटुलो घर- भक्त घिमिरे
जांचफिस - रवीन्द्र समीर
सुन्नेलाई सुनको माला - शान्तिराम ढकाल
कथा --कपिल भरतद्दाज
अमेरिकामा किस्ताबन्दीको सुखी जीवन--मनु ब्राजाकी
भ्रष्ट मनहरू...राजन थपलिया, न्यूयोर्क्
दोधार-- -राकेश काफ्ले
राजनीति र नेता--निशा खनाल अर्याल
फेसबुके नेपाली साहित्य--सक्किगोनी !--मनु ब्राजाकी
जाँचफिस ( लघुकथा ) -डा. रवीन्द्र समीर
“तँसँग के छ?” प्रमिला-विजयराज शर्मा
एकताको नहुनुको पस्चताप--आचार्य प्रभा
पिँडाबोध -सफल सुरज
अमेरिकन "वाउ" अर्थात् नेपाली आहा !- मनु ब्राजाकी
मेरो पहिलो प्रेम--डा. गोबिन्दसिंह रावत
हाय हाय लोकतान्त्रिक न्याय--शान्तीराम ज्यामाउ
तिमीले आत्महत्या गरे तिम्रो गर्भको साहित्य मर्नेछ--राज थापा
जुनेलीलाइ डी. भी. बिर्षेलाइ पी डी---शेखर ढुङेल
सत्य कुरा बौलाले गर्छ--विजय तिमिल्सिना
पुरुष र पेटिकोट -- मनु ब्राजाकी
बदला मायाको ---यात्री शेखर
धर्म परिवर्तन-आचार्य प्रभा
"के तीज छोरीचेलीलाई मात्र आउँछ ?" -आचार्य प्रभा
काठमाडौँ मात्रै होइन यहाँका मान्छे पनि फोहोरी छन्--विजय तिमिल्सिना
परदेश ! ---राज थापा , आयरल्याण्ड !
अमेरिकी जिन्दगी-आचार्य प्रभा
नयाँ व्यवसाय--जय ब. घिमिरे
कैदी विवेक--- शेखर ढुङेल
यु आर लक्की, यु आर बर्न इन नेफाल--आचार्य प्रभा
बिराट र नील आर्मस्ट्रो​ङ:--- राज थापा
बिराट नेपाल 2016-05-05
एक समयको कुरा हो एक जना बच्चा जन्मिदै थियो ! जन्मिनु भन्दा केही क्षण अघि बच्चाले ईश्वरसँग सोध्यो रे !“हे प्रभु ! म यति सानो छु कि आफै म केही गर्न सक्दिनँ भने धर्तीमा गएर कसरी बस्न सक्छु ? त्यसैले हे प्रभु ! मलाई हजुरकै साथ बस्न दिनुहोस् न ! म जन्मिन चाहन्न ! म यहीँ ठिक छु, कहीँ जान चाहन्नँ प्रभु !”बच्चाको कुरा सुनेर ईश्वरले भन्नुभयो ! “मसँग तिमीजस्ता आउने÷जाने धेरै छन् तर मैले तिमीलाई छुट्टै कामका लागि धर्तीमा उतार्न चाहेको हँु ! तिमीले याद गरिराख !” बालकले भने “हे ईश्वर ! हजुर नै भन्नुहोस् न त ! म स्वर्गलोकमा केही गर्दिनँ ? मात्र खेलिरहन्छु, रमाइरहन्छु, मलाई यो भन्दा ठुलो र धेरै केही चाहिएको छैन प्रभु !” ईश्वरले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो–“हेर बालक केही क्षणपछि तिमीलाई लिन तिम्रा आफन्त आउँदै छन् ! उनीहरू खुसी हुँदै हर्षले गद्गद् भएर मुस्कुराउँदै तिमीलाई आफ्नो छातीमा टाँसेर अङ्कमाल गरी काखमा लिनेछन् । तिमीले पनि उनीहरूले गरेको प्रेम र श्रद्धा देखेर आनन्दको अनुभूतिसहित खुसी रहनेछौ !” बालकलाई अभैm चित्त बुझेन उनले बिन्ती गरे “ल भन्नुहोस्, म यति सानोले कसरी बुझुँला र उनीहरूको कुरा ? उनीहरूले मसँग कुरा गर्नेछन्, मलाई बोलाउनेछन् ।” ईश्वरले फेरि भन्नुभयो–“ए बच्चा, तिमीलाई आफ्नो कोखमा जन्म दिने र पालनपोषण गर्ने सेवकले तिमीलाई यति मिठो लवजले असीम प्यारका साथ राख्नेछन् । तिमीले पहिला देखे सुनेको भन्दा बढी स्नेहयुक्त वातावरण
पाएर रमाउनेछौ र बेग्लै सुखको महसुस गर्नेछौ ! त्यसैले हे ! बालक तिमीसँग उनीहरूले यति शिष्ट सुमधुर व्यवहार गर्नेछन् । बिस्तारै तिमीसँग बोल्ने छन्, तिमी सुखले बस्न पाउनेछौ । अरू व्यवहारका कुरा उनीहरूले नै सिकाउनेछन् ! बालक अभैm जिज्ञासु बनेर भन्छन्, “हे प्रभु ! जुन बेला मलाई हजुरसँग बोल्न मन लाग्नेछ । त्यसबेला म के गरुँला ?” ईश्वरले मन्द मुस्कानमा भन्नुभयो–“हे बालक ! जसले तिमीलाई जन्माउने इच्छा राखेको छ, तिमीलाई पाउने उत्साहले प्रतीक्षा गरिरहेछन् । तिमीलाई पाएर उनीहरू अनन्त खुसी हुनेछन् । उनीहरूले तिमीलाई श्रद्धाभक्तिले प्रार्थनासहित स्मरण गर्नेछन् । हो, त्यही समयमा तिमीले मसँग कुरा गर्न सक्नेछौ !” बालक फेरि अनुरोध गर्छन् ईश्वर–हे प्रभु मैले सुनेको छु कि यस धर्तीमा कइयौ दुष्ट आनीबानी भएका मानवहरु पनि छन् रे नि ? त्यस्तो प्रवृत्तिका मानिसहरूसँग म कसरी बसूँला भगवन् ? त्यसैले मलाई कृपा गरेर त्यस्तो सङ्गतमा नपठाउनुहोस् ! म यहीँ खुसी छु !” ईश्वरले थप्नुभयो–हे बालक ! तिमीलाई जसले यति धेरै प्रार्थना गरेर प्राण दिन तयार भए । तिमीलाई पाउन आतुर छन् उनीहरू । तिनले तिमीलाई सुरक्षित राख्नेछन् ! बालकले अझै खुसी हुन सकेनन् उनले फेरि बिन्ती गरे–“ प्रभु ! साँच्चै भन्दै छु म हरघडी दुखी रहनेछु किन कि मैले हजुरलाई प्रत्यक्ष देख्न पाउने छैनँ !” बालकको यस्तो अनुनय विनय सुनेर ईश्वरले भन्नुभयो, “हे बालक ! तिमीले यस्तो चिन्ता रतिभर नगर, जसले तिमीलाई आफ्नो आँचलमा बेरेर राख्नेछन्, छातीको अमृत चुसाएर हुर्काउने छन् । अँगालोमा छोपेर सुताउनेछन्, एकछिन पनि आफ्नो नजरबाट ओेझेल पर्न दिने छैनन् । तिनैले तिमीसँग पलपल मेरै चर्चा गरी तिमीलाई स्मरण गरिरहनेछन् ! यसरी बालक र ईश्वर बिचको कुराकानी चलिरहँदा स्वर्गीय आनन्दानुभूति भइरहेको थियो !
एकाएक धर्तीका मानिसले चिच्याएर “बेला भयो, बेला भयो” भन्दै आतिँदै यता र उता गरिरहेका थिए । कोही कोही अँगालोमा बोक्न पाइएला कि कतिखेर हो ? लौ न प्रभु भन्दै पुकार्दै थिए । यस्तो चहलपहल देखेर बच्चालाई लाग्यो अब त म जानै पर्ने भयो । उनले चिच्याएर रुँदै भने,“हे ईश्वर अब त मैले जसरी पनि जानै पर्ने भयो । केही क्षणपछि जान्छु पनि ! दया गरेर प्रभुले यति बताइदिनुहोस् कि म जसको कोखबाट जन्म लिँदै छु, तिनको नाम के हो ?” बालकको अनुरोध पछि ईश्वरले भन्नुभयो–बालक ! व्यक्तिको खासै महत्त्व छैन, यति बुझिराख कि तिमीले उनलाई आमा भनेर चिन्नेछौ !” च्याँच्याँ आवाज सुनियो ! उपस्थित सबै खुसी देखिन्थे । ल, छोरा जन्मेछ भनेर बधाई साटासाट गरे । उता आमा भने इन्तु न चिन्तु भएर लडेकी । केहीबेर पछि उनले बिस्तारै आँखा उघार्दै गइन् । प्रसवपीडा बिर्सेर शिशुलाई छातीमा टाँस्दै स्तनपान गराउँदै आनन्द लिन पुगिन् । जताततै कृष्ण कन्यैहा ! कृष्ण कन्यैहाको जयजयकार गुन्जियो । भक्तहरुको प्रतीक्षा समाप्त भएकाले सन्तोषको सास फेरे । हामी मान्छे यसरी सृष्टि सूत्रबाट डोरिँदै आएर यही माटोमा जन्मेहुर्केर पनि आमा हृदयको न्यानो स्पर्श बिर्सन्छौं । सदैव स्नेह लेपन गरिरहने आमा हृदयको गाम्भीर्यलाई भुल्दै जान्छौ ! के यही आमा भुल्ने संस्कार नै हामी विवेकशील प्राणी हौँ भनेर गर्व गर्ने योग्यता हो ?